Omunye unyaka, enye ingqopha-mlando, okunye okuhlangenwe nakho okungajwayelekile… Lokho bekuyi-YII2019 kimi!
Ngo-Okthoba, 2019 Innovations, Microstation-Bentley
Isikhathi eside esilindelwe i-YII2019 Media Day saqala ekuseni esimnandi se-Okthoba 21. Isithangami sabezindaba esisebenza ngamandla siveze izindaba ezibalulekile njenge:
Amasistimu we-900 kanye ne-Topcon Positioning Systems aqala ukusebenza kwawo ngokuhlanganyela ngokwakhiwa kwedijithali.
I-900 Systems iqinisa okokunikezwa kweDijithali Cities ngokutholwa kobuchwepheshe be-Citilabs kanye ne-geospatial orbit technology.
I-Digital Construction Works imemezela umphakathi wayo obambisanayo kanye nokubambisana ne-O3 Solutions ukusekela izinsizakalo zokupakisha umsebenzi ezithuthukile.
Izingosi zokuxhumana, ukuxhumana nabangane obudala nabasha ngesikhathi sekhefu netiye sekhefu kwenze wonke umzuzu waba mnandi; Ngabamba ngokoqobo ingqikithi yosuku ku-tweet eyaqala ukuthandwa.
- USIMONTI PAUL (@shimontipaul) October 21, 2019
Usuku olwedlule lwafika lapho kwaphela isidlo sakusihlwa esimnandi esasihlelwe eClifford Pier eFullerton Bay Hotel.
Izimemezelo eziphambili ezenziwe kulo mcimbi bezi:
Amasistimu we-900 angenisa i-AssetWise Digital Twin Services kanye ne-OpenUturance Digital Twin Services yezimpahla nokusebenza kwenethiwekhi.
I-Class of Yakho imemezela ukuhlangana kwekharikhyulamu yesikole nama-Systems akwa-Bentley.
Ama-Systems akwa-Bentley ajoyina njengelungu lamazwe omhlaba jikelele - umemezela ukusekelwa kwe-IFC ngamawele ledijithali
Abakwa-900 Systems bamemezela izinsizakalo ezintsha zamafu ze-iTwin ye-ingqalasizinda yamawele wedijithali.
By UShimonti Paul, Isihleli Sokubonisana, TwinGeo
Thumela Previous«Langaphambilini Izinsizakalo ezintsha zefu iTwin zeDijithali yamawebhusayithi weDijithali
Post Next IGeo-Engineering neTwinGeo Magazine - Uhlelo LwesibiliOkulandelayo »